Myat Shu - 2012 December
You are here : Myat Shu » Archives for December 2012
Published By Myat Shu On Monday, December 31st 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၇၀) နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ (၆၀,၀၀၀) တည်းသော အသပြာဖြင့် ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ဦးအတွက် တစ်ဝမ်းတစ်ခါး ဖူလုံအောင် သုံးစွဲရန် စီမံခန့်ခွဲပါဟု အမေးပုစ္ဆာ ထုတ်လိုက်လျှင် ဟားဗတ်ဒ်၊ ကိန်းဗရစ်၊ ပရင်စတန်၊ မက်ဆာချူးဆက် အစရှိသည့် ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ်များမှ ဘဏ္ဍာရေး ပါရဂူတို့ လက်မှိုင်ချသွားရပေလိမ့်မည်။ ဗမာ့မြေတွင် နေ၍၊ ဗမာ့ရေကို သောက်ကာ၊ ဗမာ့လေကို ရှုသော ဗမာ့သမီးပျို ဇင်မာဦးသည် ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းတစ်ခုမျှ မတတ်ဖူးသော်လည်း ဤ ငွေခြောက်သောင်းကို တစ်လတာ လုံလောက်ရုံမျှသာမက ခြေစောင့်လက်စောင့် ငွေအပိုကလေး ထွက်လာအောင် သုံးတတ်စွဲတတ်သည်။ ဗမာ့သမီးပျို ဇင်မာဦးသည် ကမ္ဘာကျော် ယူနီဗာစတီများမှ ဘဏ္ဍာရေး ပါရဂူတို့ထက် အပုံကြီး သာသည်ဟု ကြံဖန်ပြီး ဂုဏ်ယူလိုလျှင် ဂုဏ်ယူနိုင်သည် မဟုတ်လော။
Published By Myat Shu On Tuesday, December 25th 2012. Under မျက်ရှု, သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ဦးထွန်းရှိန်၏ ဈာပနကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးရာမှ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် စတင်ပေါ်ပေါက်သည်။ ၁၉၂၀ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာရုပ်ရှင်ကို စတင်ပြသခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် “မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး အကဲဖြတ်အဖွဲ့”၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် “နိုင်ငံတော် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့”၊ ၁၉၆၂ တွင် “ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲ့” တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို ရုပ်ရှင်လောကအဖွဲ့သားများကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရသော အဖွဲ့အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ရာစုနှစ် တနှစ်စာနီးပါး ခရီးရှည်ကြီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော မြန်မာ့ရုပ်ရှင်၏ ပထမဆုံးသော ခရီးအစ၊ ခြေလှမ်းအဖွင့်များကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Published By Myat Shu On Monday, December 24th 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး
မိုးတွေပြိုကျတဲ့ ထိုနေ့မှာ သူနဲ့ ငါ ကမ္ဘာခြင်းခြားခဲ့တယ်။ မရေရာတဲ့ အိပ်မက်တွေကို အဆိပ်ခတ်ခဲ့မိလို့ ငါဟာ သံသရာမှာ ထာဝရမိစ္ဆာတကောင်လို ရွံရှာခံခဲ့ရပြီ။ ဒီလမ်း ဘာလို့ ဆူး၊ ခယောင်းနဲ့ အမြဲကြမ်းရသလဲဆိုတာ တွေးမိရင်း ၀င်္ကပါထဲချာချာလည်ခဲ့ရတာများတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကောင်းကင်ကြီး ဆင့်ကာပြိုလဲ.. ငါလဲ တွင်းဆုံးကျရော။ မနေ့တနေ့ကပေါ့…။ ဒီစကားသံလေး သိပ်ချိုသာတာပဲ၊ နူးညံ့ညက်ညောတာပဲ အထင်ရှိတုန်း…။ ဒါ ပြစ်မျိုးမှည့်မထင်တဲ့။ သိပ်ကြိုင်လွန်းနေပြန်တော့လည်း ငါ မနမ်းဝံ့ဘူး။ မွှေးလွန်းတဲ့ ပန်း ကြာကြာဝါးမိတော့လည်း ခါးတာပါပဲ။ ဒီတော့ မနေ့တနေ့ကဆိုတာ ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်။ ဆက်လျှောက်မယ်။ မယ်မဒီ .. မင်း ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဝံ့သလား။ ပါရမီမဖြည့်ရင်နေပါ.. လက်ကို ကူဆွဲပေးရင် ... Continue Reading
ဦးဝင်းတင် သို့ မြင်းထိန်းတယောက်
Published By Myat Shu On Tuesday, December 11th 2012. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
ဘဘစာအုပ်တွေ ပြန်ထုတ်ခွင့်ရတာ သိပ်ဝမ်းသာတာပဲ… လို့ စကားစတော့မှ၊ ဘဘက အိမ်မကြီးဆီက ကလေးငယ်တယောက်ကို လှမ်းခေါ်ပြီး စာအုပ်တွေ ယူလာခိုင်းလိုက်သည်။ တအုပ်ချင်းစီကို လက်မှတ်ထိုးပေးနေတဲ့ ဘဘကိုကြည့်ရင်း… စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေမိသည်။ “ဘဘကလောင်ကတော့ ခုထိကို ထက်နေတာပဲ”… လို့ပြောတော့ ဘဘက ခေါင်းကို အသာရမ်းရင်း “ကွာတော့ ကွာသွားပြီဗျ.. ခုဆို တပုဒ်တပုဒ်ရေးဖို့ တရက်ကနေ နှစ်ရက်ကူးတယ်.. အရင်ကဆို ၁၅ မိနစ်လောက်နဲ့ စာတပုဒ်ဖြစ်တာ” တဲ့လေ။ အေးလေ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဆိုတာ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် (သားသို့ပေးစာ- ၁၁)
Published By Myat Shu On Thursday, December 6th 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး ရဲဝဏ္ဏ.... ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့၊ တိတိကျကျ ပြောရရင် ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၃ ပေါ့ကွယ်။ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အင်အားကြီး ဘောလုံး၂ သင်းဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းတိှု့ မန်ယူဘောလုံးကွင်း အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ပွဲစဉ် ၁၀ ကို ကစားကြတယ်လေ။ အဲသည်ပွဲကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဆိုတာ သားလေးလည်း သိပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့် စိတ်ဝင်စားတာလဲ ဆိုတော့ ရော်ဘင်ဗန်ပါစီ ဆိုတဲ့ ဟော်လန်သား ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ကို အကြောင်းပြုလို့ပဲ သားရဲ့။ ရော်ဘင်ဗန်ပါစီဟာ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီ အစမှာ အာဆင်နယ်အသင်းကနေ မဟာပြိုင်ဘက် မန်ယူ အသင်းကို ပြောင်းသွားခဲ့တာလေ။ ... Continue Reading
ညွှတ်သော . . .၊ ပျောင်းသော . . .၊ နွဲ့သော . . .၊ ယဉ်သော . . .
Published By Myat Shu On Wednesday, December 5th 2012. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
By Aung Min Min တငြိမ့်ငြိမ့် ရေအလျဉ်မပြတ် စီးသွန်နေတဲ့ မြစ်မင်းဧရာရဲ့ အရှေ့ဘက်၊ မြေ၌ စုန့်စုန့်ပေါက်နေတဲ့ မဏ္ဍလခေါ် မန္တလေးတောင်တော်ခြေရင်းမှာ နန္ဒာကန်၊ အောင်ပင်လယ်ကန်၊ ဇောင်းကလောကန်၊ တောင်သမန်အင်းနဲ့ တက်သေးအင်း ငွေလွှာအသွင် ရေပြင်ကျယ်တို့ ၀န်းရံပြီး မန္တလေး ရတနာပုံမ် နေပြည်တော်ရယ်လို့ ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်၊ ပြာသာဒ်အဆောင်အောက်၊ ဟင်္သာပဒါးရောင်ရွှေရောင်ဖိတ်တောက် နန်းရင်ပြင်ပွဲကြည့်ဆောင်မှသည် ရွှေမြို့တော်အတွင်း ၀င်းများ၊ ပြလမ်းများဆီမှာထိ မြန်မာ့သမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးက ထွန်းလင်းတောက်ပ ဂုဏ်ဝင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာမှုသုခုမပညာတွေ ဖူးပွင့်ဝင်းလက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူလူထုအပေါ် တိမ်းညွှတ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ မြို့တည်နန်းတည် သာသနာပြုမင်းလက်ထက်မှာ အရပ်ရပ်က ဖူးပေ့၊ ညွှန်ပေ့၊ ကွန့်ပေ့၊ ကောင်းပေ့၊ တော်ပေ့ ဆိုတဲ့ ပညာရှိစာဆိုများ၊ အနုပညာသည်များဟာလည်း မန္တလေးနေပြည်တော်မှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း မြှောက်စားချီးမြှင့်ခြင်းခံရကာ ... Continue Reading
တစ်လမ်းစီ စီးနေသော လမ်းမများ
Published By Myat Shu On Tuesday, December 4th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
ကဗျာဆရာကျောပိုးအိတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ မိန်းမကောင်းပုံလေးတစ်ပုံကို ခေတ်ကြီးက သိုဝှက်သိမ်းဆည်းမထားနိုင်ဘူးဆိုတာယုံရင် ဒီကဗျာဟာ နင်ဖတ်စရာမလိုပါဘူး။ အဲလိုအချိန်တွေဆို လူဘယ်လောက် ရှုပ်ရှုပ် ဗြုန်းဆို ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်ချင်သလို အသံကုန် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်ချင်ခဲ့။ ဒီနေ့မအားတော့ဘူး။ အချိန်တွေ သင်္ချာတွေနဲ့မှ လူရာဝင်တဲ့ခေတ်ကို နင့် အကြောင်းတွေပြန်ပြန်တွေးရင်း “ဒီနေ့ မအားတော့ဘူး” ဆိုပြီး တံခါး စောင့်ပိတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဖက်ခေါင်းအုံးဟာ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဆိုရင် နင့်အကြောင်း ညည်းမိတဲ့ ငါ့ညတိုင်းဟာ လူတိုင်းသက်ပြင်းချမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်မယ်။ ၀ိုင်နီတွေလည်း အရောင်မပြောင်းဘူး။ ဘုရားပေါ်က ခိုတွေလည်း ညည်းညူ တုန်း။ လှည်းတန်းထိပ်က မြေပဲပြုတ်သည်အဒေါ်ကြီးလည်း အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ခုထိရောင်းကောင်းတုန်း။ ငါအားပေးတဲ့ ဘောလုံးအသင်းကို နင် မကြိုက်တော့ သူတို့ ဂိုးသွင်းလိုက်တိုင်း နင့်ကို လွမ်းမိတယ်။ သင်္ဘောသီးထောင်းကြောင့် ချွေးစို့တိုင်း လကွယ်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ငါ့ရှေ့က ခုံလွတ်လေးဆီ ထောပတ်သီးဖျော်ရည်ခွက်လေး တွန်းတွန်းပို့ပေးမိ။ အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းဇာတ်ကားတွေကို အလကားပါလို့ နင်ပြောပေမယ့် နင်ယူလာတတ်တဲ့ ထီးနီလေးကို ငါကိုင်မိုးပေးတိုင်း မော့ကြည့်ကြည်နူးတတ်တဲ့ နင့် မျက်ဝန်းကြည်ကြည်တွေကို လွမ်းတယ်။ ခရိုးခယိုင်ဘူတာရုံလေးတစ်ခုမှာ ငါတို့ အားတဲ့တနေ့ ကမ်းခြေကို သွားတွေ့ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ငါက ခုချိန်ထိ ခရုတွေကောက်ကောင်းတုန်း၊ သောင်ပြင်သဲမှာ နင့်နာမည်တွေ ရေးကောင်းတုန်း၊ တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း ရင်းနှီးဖူးသူတွေနဲ့ဆုံတိုင်း သက်ပြင်းတွေကို ရင်ဘတ်ထဲကော့ထည့် သူတို့ အမုန်းတွေနင့်ဘက်မလှည့်အောင် ငါ သိပ်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေတတ်တာ ငါ့ကိုယ်ငါ ရယ်မောနာကျင်မဆုံး....။ ဟိုးတုန်းက အတူကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာ ချစ်ခြင်းသာ ခြုံမထားဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက် လုံခြုံမယ်လို့ နင်ယုံထားလဲ။ ငါတစ်ယောက်တည်း ... Continue Reading
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ကျမ၏ ကိုယ်တွင်းပဋိပက္ခ
Published By Myat Shu On Tuesday, December 4th 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
globaltimes.cn အမေရိကားကို စရောက်သည့် အချိန်ကစပြီး ယခုချိန်ထိ ကျမစိတ်အ၀င်စားဆုံးအရာများထဲတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ပြန်လည် လည်ပတ်သည့် ဆိုင်ကလေးများသည် ပထမဆုံးနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ သာမန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဆိုင်ကလေးများသည် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ခန်းများလို သီးသီးသန့်သန့် သူ့နေရာနှင့်သူ မဟုတ်ဘဲ ကုန်စုံဆိုင်ကြီးများနောက်ဘက်မှာ ဆိုင်ခန်းဖွင့်ပြီးဖြစ်စေ၊ 7/11လို စတိုးဆိုင်များရှိသော square ခေါ် ဆိုင်ခန်းစုပေါင်းဝန်းထဲတွင် ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း တစ်နေရာဖြစ်စေ လူဝင်လူထွက်များသော နေရာများတွင် ယှဉ်ပြီး ဖွင့်ထားလေ့ရှိသည်။ ထိုဆိုင်ခန်းလေးများသည် သာမန်အမြင်ဖြင့်ကြည့်လျှင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လည်းမရှိ၊ ဖန်ပုလင်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထိခတ်မိသံ၊ အလူမီနီယမ်သံဗူးများကို ဆင့်ကာဆင့်ကာ ပစ်ချသဖြင့် “ကလုံ၊ကလုံ” မြည်သောအသံ၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအများစုမှာ မက်ဆီကန်လူမျိုးများဖြစ်ကြရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း လာရောင်းသူများနှင့်ဖြစ်စေ၊ သူတို့အချင်းချင်းဖြစ်စေ အောဟစ်ပြောဆိုကြသော ... Continue Reading